Minisitry ny fizahantany ao Jamaika: Araraoty ny tombony lehibe amin'ny tsenan'ny Niche fizahantany Rum
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Minisitry ny fizahantany ao Jamaika: Araraoty ny tombony lehibe amin'ny tsenan'ny Niche fizahantany Rum
Fizahan-tany any Jamaika Ny minisitra Hon. Edmund Bartlett dia miantso ny tombotsoan'ny sehatra tsy miankina mba hanararaotra bebe kokoa ny tsenan'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ronono mba hiteraka taham-pisondrotana avo kokoa amin'ny fahatongavan'ireo mpitsidika sy ny vola miditra ho an'i Jamaika, tamin'ny vanim-potoana taorian'ny COVID-19.
“Mirongatra ny fizahan-tany Rum satria mihamaro ny mpandeha manao distilleries sy festival rum ho ivon'ny làlan-kalehan'izy ireo fialantsasatra, ary manana vokatra ronono tena tsara i Jamaika - marika premium sy distilleries manan-tantara. Ny fanararaotana bebe kokoa an'io fironana io dia ahafahantsika mamokatra tahan'ny fitomboana avo indrindra amin'ny fahatongavan'ireo mpitsidika sy ny vola miditra, "hoy i Bartlett.
"Fotoana iray hizahantsika ny ampahany amin'ilay tsena iraisam-pirenena izay mientanentana amin'ny fanjifana tsoka ary milalao tanteraka amin'ny tanjak'i Jamaika amin'ny maha-mpitarika manerantany amin'ny resaka rum premium," hoy izy nanampy.
“Etsy an-dàlana, rehefa ao aoriantsika ny areti-mandringana ary nesorina ny fameperana ny dia, tiako hojerena ny famoronana làlana rumana misy lohahevitra izay mitondra mpitsidika amin'ny diany mahatsiravina any amin'ireo distilleries rehetra an'ny nosy, izay ahafahan'izy ireo milentika ao anaty ilay manaitra antsika lova tanindrazana rehefa mankafy ny fanahinay nahazo loka ”, hoy Andriamatoa Bartlett.
Mino koa ny minisitra Bartlett fa ny fanolorana fizahan-tany dia azo amidy ho traikefa misy tanjona maro izay ahafahan'ny mpandeha mankafy ny “Havana Club any Cuba, ny Mount Gay Eclipse Gold any Barbados, ary ny Appleton malaza eran-tany eto Jamaika. Ny Karaiba dia fantatra amin'ny toerana maha-toerana nahaterahan'ny rum; andao hampiasa izany ho tombontsoantsika izy. ”
Ny Minisitra dia niresaka tato ho ato nandritra ny fanombohana virtoaly ny fizarana fahatelo tamin'ny Fetiben'ny Rum Jamaica, izay kasaina hatao ny 27 martsa lasa teo. Tahiry fampivoarana (TEF).
Ny hetsika Jamaica Rum Festival dia hatao an-tsehatra nomerika amin'ity taona ity, amin'ny fanarahana ny protokolon'ny COVID-19 ary hahitana seminera fanabeazana ara-barotra, fialamboly, fitsidihana ronono virtoaly ary fampirantiana.
“Amin'ny alàlan'ny fitsinjaram-pahefana amin'ny habaka nomerika, azontsika atao ny mizara ny fahaizan'i Jamaika amin'ny resaka rum, sakafo, zavakanto ary mozika amin'ireo mpijery rum, mpamokatra ary matihanina amin'ny indostria betsaka kokoa. Azoko antoka fa mpiaro any ampitan-dranomasina maro no mijery mailaka an-tserasera no ho voatarika ho tonga eto haingana araka izay azo atao mba hanandramana ny kolontsain'ny rum ao Jamaika, ”hoy ny minisitra Bartlett.